Dowladda oo caburin ku billawday waalidiinta caruurtooda la askareeyay | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamada Dowadda Fadaraalka ayaa maanta hor istaagay dibad-bax ay qorsheeyeen in ay dhigaan waalidiinta caruurtu ka maqan tahay, sida qaarkood u sheegeen idaacadaha magaalada Muqdisho, oo ay ka waceen qadka taleefanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waalidiinta Soomaaliyeed, ee caruurtooda loo qaaday dalka Eritrea, kadibna la sheegay in laga dagaal galay waqooyiga Itoobiya, ayaa maanta loo diiday in ay cabashadooda ku soo bandhigaan waddooyinka magaalada Muqdisho.
Ciidamada Booliska, gaar ahaan kuwa loo yaqaan Haramcad, ayaa is hor istaagay mudaharaad nabadeed oo waalidiintu maanta qorsheeyeen in ay qabtaan, waxaana loo diiday in ay isugu soo baxaan Is-goska KM4, iyo taallada Daljirka Dahsoon.
Saxaafadda ayaa dhankeeda laga hor istaagay in ay muuqaallo ka duubaan waalidiinta, waxaana ugu danbayn la kala raacdeeyay waalidiinta.
Irrintaan ayaa imaaneysa iyadoo aan wali wax war ah aan laga helin guddigii uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Xilgaarsiinta, Maxamed Xuseen Roobe, u magacaabay xaqiiqo raadinta cabashada waalidiinta.
Keydmedia Online, ayaa hore u tabisay in Rooble, u tafaxeytay marin-habaabinta, qaddiyadda dhalinyarada maqan ee Kooxda Farmaajo ka iibiyeen Itoobiya, kadib markii uu magacaabay guddi, ay xubno ka yihiin qaar ka mid ah shaqsiyaadka u eedeysan kiiska askarta laga dagaal galiyay waqooyiga Itoobiya, ilaa haddana aan meel lagu sheegin raqdooda iyo ruuxooda.
Caburinta maanta lagu sameeyay dulmanayaasha iyo aamusnaanta guddigii xaqiiqo raadinta, ayaa ka dhigan in Rooble uusan shaqo ugu maqnayn waalidiinta caruurtooda la askareeyay.